के महिलाहरू ‘निर्वस्त्र’ भएर सुत्दा फाइदा हुन्छ ? - e-Sidha Nepal
हाम्रो संवाददाता ३२ जेष्ठ २०७७, आईतवार १३:२४
ब्रा र पे’न्टी लगाएर सुत्दा रक्तसञ्चार र श्वासप्रश्वा’समा अवरोध सिर्जना हुन्छ । यसले गर्दा शरीरका कोषमा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन र न्युट्रिसन्स पुग्न पाउँदैन, जसले गर्दा शरीर थकित हुन्छ ।
ब्रा र पे’न्टी खोलेर सुत्दा गहिरो निद्रा पर्छ । किनकि, यसरी सुत्दा शरीरले खुकुलो महसुस गर्छ । यसले गर्दा श्वासप्रश्वास र र-क्तसञ्चार दुवै सुचारु अवस्थामा रहन्छ र निद्रा पर्छ ।
क्या’न्सरको जो-खिम कम–
कँसिलो ब्रा लगाएर सुत्ने युवतीलाई स्त’नको क्या’न्सर लाग्ने ‘जोखिम’ बढी हुन्छ । कँसिलो ब्राले स्त’न वरिपरिको भागमा र’क्तसञ्चार सुचारु हुन दिँदैन । जसले गर्दा क्या’न्सरको जोखि-म बढ्छ ।
टाइट ब्रा लगाएर सुत्ने महिलामा स्त’न सुनिने, स्त’नमा पानी जम्ने जस्ता सम’स्या देखिन सक्छन् ।
योपनि- यी चर्चित ८ ‘से’क्स टिप्सः काम गर्दैनन् तर हरेकले जान्नैपर्छ !
यौ’न जीवन तथा यौ’न कार्यलाई अझ स्वस्थ्य अनि रमाइलो बनाउने अनेकन उपाय छन्। तर केही यस्ता चर्चित से’क्स टिप्स पनि छन् जो वास्तवमा काम गर्दैन् अर्थात यी टिप्स मिथ्या मात्रै हुन। हरेकले सम्भोग अघि यी
से’क्स गर्दा आवाज निकाल्नु–
से’क्सको समय आवाज निकाल्नु एक तवरले से’क्सी कार्य हो। तर छिमेकी पनि तर्सिने गरी आवाज निकाल्ने, कराउने न त स्वभाविक हो न स्वस्थ नै। यदि स्वभाविक आवाज होइन र जबर’जस्ती निकालिएको हो भने बरु यसले तपाइको से’क्स पार्टनरको मु’ड भने बिगा’र्न सक्छ।
टो’क्ने वा चि’थोर्ने–
हात र मुखको केही क्रिया आनन्ददायक हुन्छ, साथै यस्तो गर्ने सल्लाह पनि दिइन्छ। तर पागलझै छाला रातो हुने गरी टो’क्ने वा चि’थोर्ने काम गर्नु हुँदैन।
अवस्भाविक ठाउँमा औलाको प्रयोग–
यहाँ अवस्भाविक ठाउँ भन्नाले पार्टनरको पछाडीको अं’गलाई इंकित गरिएको हो। से’क्सको दौरान ‘एनस’मा औलाको प्रयोग गरि स्टिमुटेल गर्नुपूर्व आफ्नो पार्टनरलाई जानकारी दिनु आवश्यक हुन।
पार्टनको अगाडी ठूलो बन्ने–
हेरेक यौ’न सम्बन्धमा एउटा पार्टनर ‘बो’सी’ अर्थात हुकुम चलाउन खोज्ने हुन्छ। यो जरुरी पनि हो। तर यही व्यवहार रुखो भइदियो भने सारा खेल समाप्त हुन्छ। आफ्नो पार्टनरलाई काम अह्राउने काम ख्याल गरेर मात्र गर्नुस्।
जिब्रोको अत्याधिक प्रयोग–
कि’स गर्दा जिब्रोको प्रयोग से’क्सी मानिन्छ। तर अत्याधिक होइन। जथा’भावी रुपमा अन्य अं’गमा पनि जिब्रोको प्रयोग गर्दा धेरै अं’गमा थुक वा र्याल पर्दा कसैले पनि मन पराउँदैन।
से’क्सको च’रम समयमा पार्टनरको कपाल ता’न्ने काम ठिक जस्तो लाग्छ, तर बे’स्सरी होइन। विस्तारै कपाल ता’न्दा वा मुसा’र्दाको असर अर्कै हुन्छ भने बेस्स’री ता’न्दा मु’ड खराब हुन्छ।
से’क्सको समयमा अ’श्ली’ल शब्दहरु धेरै बोल्ने काम राम्रो होइन। यो पनि एक कला हो, बढी बोल्दा राम्रो सुनिदैन, मु’ड मात्र बि’गार्ने काम हुन्छ।